Akhriso fariimo Jacayl oo kobcinaya Maskaxdaada Iyo jacaylkaada:Qalinkii fanax fariid | Caalamka24.net
Akhriso fariimo Jacayl oo kobcinaya Maskaxdaada Iyo jacaylkaada:Qalinkii fanax fariid
macaanto waxaa garbahaaga taagan toban qof, tobankaas qof kaliya waxay arkaan xanuunka ku haya, laakiin tobankaas qof waxaa ku jira qof xanuunka u dareemaya sidaas u dareemaysid, wuxuuna kula qabaa dhibkaad xanuunka ka maraysid, macaanto qofkaas qof kale maahan waa aniga, ogoowna dhibkasta oo aad dareemaysid waan kula dareemaya waxaan ku rajaynaya caafimaad macaanto.
hadalada qaar waxay dhaawacaan qalbiga, halka kuwa kalena ay kobciyaan maskaxda, macaanto haddaan markasta ereyo macaan kuso qorayo ogoow waxaan raba inaan qalbigaada kobciyo anigoo og in qalbiga ay waraabiyaan erayada macaan.
xiliyada waxaan ugu jeclahay intaad agtaada joogo , laakiin adiga waxaad igu yaraysaa aragtida, macaanto markasta waxaad la socota dhaq dhaqaaqa qalbigayga haddii aan ku dhaho inaan kula kulmo baan raba micnaheeda waxaa waaye waxaan rabaa inaan farxad helo macaanto waan ku jeclahay.
aragtida dheer waxay keenta qalbi qurux badan, hadaan markasta kaala hadlo arrimo kusaabsan mustaqbalka ogoow waxaan rabbaa inaan qalbigada quful ku xirto si kalena qalbigada kuma xiran karo aan ka ahayn inaan ku guursado.
macaanto ogoow wakhtiga inuu u soconaya sida dabaysha oo kale, cimrigeenana waa lamid, macaanto waxaan rabaa inaan wakhtiga la tartamo, si kale kulama tartami karo wakhtiga aan ka ahayn inaan gacmaha is qabsano oo aan dhisno guri ka qurux badan Guryaha caalamka ku yaal, haddaan ku iri ur ha u malayn inaan ula jeedo Guri dhismahiisa qurux badan yahay ee waa Qalbi qurux badan macaanto.
ilaa intaad ka dhimanaysid waxaan joogayaa garabkaaga waxaana kula qaadanayaa neefta quruxda badan ee afkaada kasoo baxaysa marna kaama tagayo ilaa aan dhinto mooye.
macaanto haddaad adigoo soconaysa aad kuftid ha fariisan horay usii soco haddaad sii socotana waxaad ka mira dhalinaysaa jacaylkeena, macaanto markasta aad kufta waxaad jaanis siisa cadowgeena, laakiin markaad kacdo, waxaad niyad jabisaa cadowgeena.
hambalyo dhamaan akhristayaasha ku xiran shabakadda somalisun.net waxaan u sheegaynaa inaan farriimaha jacaylka aan ka dhignay kuwa taxane ah, haddaba kamid noqo akhristayaasha ku xiran, saaxxiib dhowna ku dhigo warbaahinta Somalisun.net.